अश्लील चलचित्रमा पुरुष किन धेरै आकर्षित हुन्छन् ? « Nagarik Khabar
अश्लील चलचित्रमा पुरुष किन धेरै आकर्षित हुन्छन् ?
प्रकाशित मिति :2March, 2021 8:07 pm
काठमाडौं – पत्रपत्रिका र वैज्ञानिकहरूले पुरुष र अश्लील चलचित्रको अत्यधिक प्रयोगबारे धेरै लेखेका छन् । २०१६ मा बीबीसीलाई ब्रिटिश यौनमनोवैज्ञानिक एन्जेला ग्रेगोरीले भनेकी थिइन् कि सजिलै प्राप्त भइरहेको अश्लील चलचित्रका कारण पुरुषमा यौन उत्तेजना नहुने रोग बढेको छ ।
कपाल काट्दा कैंचीको सट्टा चक्कु र हथौडाको प्रयोग (भिडियोसहित)
एजेन्सी । कपाल काट्न कैंची र काँइयोको प्रयोग गरिन्छ । यो विषय हामी सबैलाई थाहा
ओली-नेपाल वार्ताको फरक दृश्यः झलनाथ गएनन्, सम्मान कुर्सीमा रावललाई ‘सरप्राइज’ !
काठमाडौं । पानी बाराबारको स्थितीमा रहेको नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरुबीच आज पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भेटवार्ता
स्वास्थ्य र सुन्दरताको अनुपम संगम, जहाँका मानिसहरु १५० वर्षसम्म बाँच्छन
एजेन्सी । अनियमित र खराब जीवनशैलीका कारण विभिन्न शारीरिक समस्याबाट पीडित हुनुपर्छ । यसबारेमा सबैलाई